Double sosona Steam Water Bath avalin'izy Sterilizer - China Qingdao milina tapaka
FOB Price: US $ 10000-25000
Ny Double sosona etona Water Bath avalin'izy Sterilizer no ampiasaina mba sterilize sakafo. Misy karazana rano fandroana, dipoavatra karazana rano, ary ny etona ny rano ho an'ny karazana safidy araka ny fonosana karazana sakafo. Raha ny mahazatra dia ny milina mandany tanky roa ny rano mafana fanodinana ny sterilize. Izany preheat ny fitoeran-tsoliky ny rano mafana ho any amin'ny sterilizing mari-pana, ny sterilize hanafohezany ilay fotoana. Ny fikarakarana sakafo avalin'izy autoclave hafanan'ny dia nametraka avo amin'ny voalohany, hiarovana ny vokatra tsara.
Rehefa avy sterilizing, ny fanamboarana ny rano mafana ho any amin'ny ny tanky, ny miasa mpanelanelana efa niasa ho afaka mampiasa, etona fahavaratra sy ny heriny ary ny fotoana sterilizing. Dia toy izany ihany koa sy ny ara-nofo afa-tsy zavatra hafa resources.The roa sosona etona ny rano fandroana avalin'izy sterilizer temperature is even, water flow is even, there’s no dead space in the tank.The water spraying autoclave machine adopts most advance computer control system in the world.The full progress is fully computer controlled by PLC, one time finish, no need man operation.The PLC can store more than 100 pcs sterilizing programme. The sterilizing is standardization.
Mandany hafanana diaphragm miditra tsimoramora, manitsy ny mari-pana mandeha ho azy ny fiara.
Mandany avo fahombiazana hafanana, minitra vitsivitsy fotsiny dia afaka mahazo ny mari-pana hiteraka.
Rehetra ny miditra tsimoramora misokatra sy ny akaiky dia fehezin'ny ordinatera.
Milina tsirairay dia afaka nifampitaha FO valume fanaraha-maso ny rafitra.
Simulation rafitra fanaraha-maso ny mari-pana, afaka manova ny dingana maro fanafanana.
Ny roa sosona etona ny rano mafana fandroana avalin'izy sterilizer pielezana aza, ny hatsaran'ny fanaraha-maso dia mora.
Double sosona rano fandroana avalin'izy sterilizer tsara ho malefaka fonosana vokatra, indrindra fa ho an'ny fonosana lehibe, hafanana tafiditra hafainganam-pandeha dia fifadian-kanina, hiteraka vokany raha tsara.
Ny fikarakarana sakafo Stainless vy tifitra rano hiteraka milina afaka pirinty sy fitehirizana ny fotoana, mari-pana, curve tsindry sari-tany.
Metal sambo: Tin raharaha, aliminioma afaka, ary ny fitaratra afaka
Soft fonosana: Aluminium foil kitapo, ny hafanana avo avalin'izy paosy, vacuum kitapo, mangarahara kitapo
Plastic fitoeran-javatra: PP tavoahangy, HDPE tavoahangy
kakaô vovo hiteraka milina
trondro sakafo fikarakarana milina
sakafo vovo hiteraka milina
sakafo hiteraka fitaovana
Mitsivalana High Pressure Steam Sterilizer
milina indostrialy sakafo hiteraka
Jam hiteraka milina
Mini sakafo avalin'izy ireo milina
Food Pet hiteraka Machine
avalin'izy fikarakarana sakafo
saosisy hiteraka milina
autoclave sakafo kely sterilizer
kely uht hiteraka milina
Steam trondro am-bifotsy Food hiteraka avalin'izy
etona sterilizer Price
talcum vovo hiteraka milina
Mitsangana Pressure Steam Sterilizer
Stainless Steel Water Food Processing fanafody ...